नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी ६ विकेटले पराजित, एकदिवसिय मान्यता नजिक - Nepal Cricket
Nepal thrashed PNG by6wickets in the play-off match of ICC World Cup Qualifiers 2018. Photo: ICC
आइसीसी विश्वकप छनोटको प्लेअफमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ । जितसँगै नेपालले चार बर्षका लागि एकदिवसिय मान्यता पाउने बलियो सम्भावना बनाएको छ । तर त्यसका लागि नेदरल्याण्ड्स र हङकङको खेलको नतिजा कुर्नुपर्ने भएको छ ।
जिम्बावेको हरारे मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पपुवा न्युगिनी २७ ओभर २ बलमा एक सय १४ रनमा अलआउट भयो । हङकङ विरुद्धको सेटलाई नै उतारेको नेपालका लागि सन्दिप लामिछाने र दिपेन्द्र ऐरीले उत्कृष्ट बलिङ गरे । जसका कारण पिएनजी सस्तैमा समेटियो ।
१२ रन हुदा पहिलो विकेट गुमाएको पपुवा न्युगिनी, २९ रन हुदा दोस्रो विकेट खेर फाल्यो । उसका आसाद भाला १० रनमा, टोनी उरा ११ रनमा आउट भए । त्यसपछि सन्दिपले ब्यक्तिगत ४ विकेट लिएपछि पपुवा न्युगिनीको पारी पुरै धरापमा पर्यो । सन्दिपको बलिङका कारण ५१ रनमा तीन विकेट गुमाएको पिएनजी ६८ रन बनाउदा ६ विकेट खेर फाल्यो ।
Nepal team getting ready for their National Anthem. Photo: ICC
सन्दिपले साद सुपरलाई ११ रनमा, सीसी बाउ मात्र ४ रनमा र महुरु दाईलाई मात्र ५ तथा किप्लिन दोरीगालाई १० रनमा पेभेलियन फर्काए । त्यसपछि दिपेन्द्र ऐरीले पनि चार विकेट लिदै पिएनजीलाई सस्तैमा आउट गरे । उनले अमिनीलाई १९ तथा जेसोन किललाई १५ रनमा आउट गरे । बलिङमा सन्दिप र दिपेन्द्रले चार-चार विकेट लिए ।
जवाफमा नेपालले २३ ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो । नेपालले सुरुवात भने आज पनि राम्रो गर्न सकेन । ९ रन हुँदा पहिलो विकेट गुमाएको नेपालले १३ रनमा दोस्रो विकेट खेर फाल्यो । नेपालका ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ले एक र अनिल शाह नौ रनमा आउट भए । त्यसपछि कप्तान पारस खड्का २० रनमा आउट भएपछि नेपालले ३५ रनमा तीन विकेट खेर फाल्यो ।
सुरुवातमा नै तीन विकेट गुमाएर दबावमा आएको नेपालका लागि आरिफ शेख र दिपेन्द्रसिंह ऐरीले ६७ रनको उत्कृष्ट साझेदारी गर्दै टिमलाई जितको नजिक पुर्याए । आरिफले २६ रनको योगदान गरे । दिपेन्द्रले अविजीत ५० रन बनाए ।
अर्को खेलमा हङकङले नेदरल्याण्डस्बाट एक सय ७५ रनको लक्ष्य दिएको छ । जवाफमा हङकङ ब्याटिङमा रहेको छ । सो खेलमा हङकङ हारेमा नेपालले एकदिवसिय मान्यता पाउनेछ । यदि हङकङ विजयी भएमा सातौ स्थानको प्लेअफका लागि हुने नेपाल र हङकङ विचको विजेताले एकदिवसिय मान्यता पाउनेछ ।